Izinganekwane ezi-5 Zokuxhumana Komphakathi | Martech Zone
NgoMsombuluko, Novemba 2, 2009 NgoMsombuluko, Februwari 8, 2016 Douglas Karr
Lokhu kungaba okuthunyelwe okuphindwayo… kepha ngidinga ukukugcizelela lokhu. Ngibuke izinkampani eziningana zikhubeka kuwo wonke amasu ezokuxhumana. Ekugcineni bayishiya ngokuphelele. Umbuzo angikwazanga ukubaphendula ukuthi kungani bezame kwasekuqaleni?
Ngithanda ukucabanga ngemithombo yezokuxhumana njengesikhulisi… i ngokumangalisayo i-amplifier enamandla. Uma unesisekelo esiqinile sobudlelwano bomphakathi nokumaketha, futhi ukumboza kokubili ukutholwa nokugcinwa ngempumelelo, umsebenzi wakho omkhulu uzogqama impela njengoba uqala ukubandakanya nokwakha idumela online. Uma unecebo eliphakathi le-PR ne-Marketing, imithombo yezokuxhumana ingakulimaza.
Izinganekwane zami ezi-5 Zokumaketha Kwezenhlalo
Imithombo yezokuxhumana ithatha indawo yewebhusayithi. Usadinga indawo yokuthwebula imikhondo futhi udonsele ukunaka kwimikhiqizo yenkampani yakho noma amasevisi.
Imithombo yezokuxhumana ithatha indawo yokuthengisa nge-imeyili. I-imeyili yi- Phusha indlela eyazisa amakhasimende namathemba lapho udinga ukuthi axhumane nawo. Eqinisweni, i-Social Media idinga ukuxhumana okuningi kwe-imeyili ukugcina abasebenzisi bezingosi zomphakathi bebuya. Cabanga ngayo yonke i-imeyili oyithola ku-LinkedIn, Facebook naku-Twitter!
Ukusetshenziswa okuphezulu kwemithombo yezokuxhumana kusho ukuthi yindawo enhle yokukhangisa. Imithombo yezokuxhumana akuyona into yokuphonsa izikhangiso phezu kwe, kuyinto okufanele idluliselwe ngaphakathi. Izinkampani eziningi kakhulu zithela imali ezikhangisweni ze-banner nasekukhangiseni okubhaliwe kumasayithi wezokuxhumana lapho abasebenzisi bengenanhloso yokuthenga.
Umthelela wemidiya yezenhlalo awunakulinganiswa. Umthelela wezokuxhumana can kulinganiswa, kunzima kakhulu ukukala umthelela. Uzodinga ukusebenzisa ifayili le- Okuqinile analytics package - mhlawumbe ngokuhlanganiswa kwemithombo yezokuxhumana, noma ukuthola ukuthi ungayisebenzisa kanjani ngempumelelo ikhodi kusuka kwamanje analytics package ukuthatha imikhondo nokuguqulwa okuvela ezinkundleni zokuxhumana.
Imithombo yezokuxhumana ilula, wena nje yenza lokho. CHA! Imithombo yezokuxhumana ayilula. Zicabange usephathini yesidlo sasemini futhi ukhuluma ngemikhiqizo nezinsizakalo zakho unethemba. Uyamamatheka, uyamomotheka, ubuza umbuzo, usho zonke izimpendulo ezifanele… ukhokhela isidlo sasemini… uthatha ukwethemba kwakhe. Ku-Intanethi, awusoze wababona beza, awusoze wazi ukuthi bake baba kuphi, awazi lutho olunye ngaphandle kokuthi bazi kakhulu ukuthi kunawe.
Imithombo yezokuxhumana yakha ukwethembana nothile okungenzeka awukaze umbone. Kunzima, kuthatha isikhathi… kuyimarathon, hhayi i-sprint. Izinkundla zokuxhumana zehluleka izinkampani eziningi ngoba zibukela phansi izinsizakusebenza nesikhathi esithathayo ukwakha umfutho. Abazi ukuthi ukutshalwa kwezimali kwesikhathi eside, hhayi isu lesikhathi esifushane.
Ngecebo, ungaqhuma uphume ngesango futhi ukhulise ibhizinisi lakho ngaphezu kokulindelekile. Ngaphandle kwayo, ungahle uphonsa ithawula.
Lesi yisizathu esenza ukuthi iSouthwest Airlines neZappos bakwazi ukuphumelela ngeSocial Media, kepha i-United Airlines neDSW azenzi kahle kanjalo. ISouthwest Airlines neZappos kwakuyizinkampani ezinhle kakhulu, ezazigxile kumakhasimende ngaphambi imithombo yezokuxhumana yavela kuleli qophelo. I-United Airlines kungenzeka ingakwazi ukwamukela isu lezokuxhumana uma unikezwa ubuholi obugunyaziwe nobungamandla.
Njenge-panelist namuhla e-Real Estate BarCamp Indianapolis, ungabona uhla lwama-ejensi nabathengisi egumbini. Abanye, njengomngani omuhle neklayenti uPaula Henry (bobabili I-Roundpeg futhi DK New Media umsize), bashesha kakhulu kuze kube manje ukuthi bakhansele yonke imidiya yendabuko futhi bakwi-inthanethi ngokuphelele. Inkinga kaPaula akuyona kanjani ukuthola imikhondo… Yindlela yokugcina isu lakhe lemithombo yezokuxhumana ngejubane elikulo ngenkathi usebenza yonke imikhondo yakhe.
Abanye egumbini bebesasebenza ngemuva kwejika… bengenayo i-twitter, i-facebook, i-persona eku-inthanethi, i-search engine optimization, ukubhuloga, njll. Akukephuzi kakhulu ukuthi laba bantu bakhe isu lokuthengisa online elisebenzayo… kepha futhi kusenesikhathi ukubenza bagxumele isu leSocial Media ngombono wami othobekile.
Abasanda kufika kudingeka bafunde ukuhamba ngaphambi kokuba bagibele. Badinga iwebhusayithi ephumelelayo engaheha ithrafikhi futhi inikeze imininingwane yokuxhumana ukuze bahlanganyele nomthengisi wezindlu. Badinga ukucwaninga futhi basebenzise amagama angukhiye anomthelela esifundeni abasisebenzelayo - kufaka phakathi omakhelwane, amakhodi we-zip, amadolobha, izifunda, izifunda zesikole, njll. Badinga ukuqasha incwadi yezindaba ye-imeyili ukuze baxhumane nemikhondo namakhasimende angaphambilini. Badinga ukuhambisa Real Estate izixazululo mobile ukufaka esikhundleni sezindiza abazigcinayo phambi kwezakhiwo.
Imithombo yezokuxhumana inganikeza inani eliholayo lemikhondo ekuthengiseni kwakho ... kepha kufanele ube nofanele wokuthengisa endaweni yakho, ulinganise umthelela wemiphumela, futhi usebenze njalo uhlelo lwakho lokumaketha ukondla nokubamba imikhondo namakhasimende. Imithombo yezokuxhumana iza ngokulandelayo… kukhulisa uhlelo lokumaketha olusebenza ngendlela emangalisayo futhi luqale ukukhubazeka njengoba igunya nobala kukhula.
Tags: imeyili Marketingizinganekwanesocial mediaSocial Media Marketingizinganekwane zokuxhumana
Izibikezelo Zokumaketha ezibikezelayo nge-ThinkVine
Nov 3, 2009 ngo-10: 03 AM
Sawubona Doug, okuthunyelwe okuhle.
Abantu abaningi badinga ukuqeda inganekwane ethi "Social Media is a Cakewalk". Yimina ngedwa owamukela kuqala ehhovisi, futhi nezikhathi abaphathi abangicele ngazo ukuthi "ngibafundise ukusebenzisa i-Twitter kahle" ehoreni noma amabili ingididile. Lezi zinto zithatha isikhathi, ukuzibophezela - kanye nesifiso sokufunda. Abantu bafuna nje ukulungiswa okusheshayo ku-SM, ngoba bacabanga ukuthi kuyindlela esheshayo yokwenza imali. Akunjalo ngempela, futhi udinga ukufunda ngokwenza.
Nov 4, 2009 ngo-4: 04 AM
Kushiwo kahle, Andrew! Lapho abantu bethi "ngifundise ukuyisebenzisa kahle", kwesinye isikhathi basuke beqonde ukuthi… "singabusebenzisa kanjani lobu budedengu ukuze kuzuze thina". Ngiyagijima… ngikhala! 🙂
Nov 3, 2009 ngo-1: 27 PM
Ndatshana enhle, ngiyabonga kakhulu. Ehhovisi lami kube nokudideka okuningi mayelana nezici ezithile zokuxhumana, ngizokuthumela nge-imeyili lokhu ehhovisi!
Nov 4, 2009 ngo-4: 03 AM
Ngiyabonga Joe! Uma ihhovisi lakho lidinga ukumba lijule kancane, yilokho DK New Media enza! Ngazise uma singasiza.
Nov 3, 2009 ngo-4: 53 PM
@douglaskarr Imininingwane yakho iyaqabula, ikakhulukazi isithombe sakho sokwahlukana ukuthi akusibo bonke abakulungele ukubamba iqhaza ku-SM. Impela, labo ababona amanethiwekhi ama-SM njengenye indawo yokufaka ukhonkolo imiyalezo yokukhangisa bakhombisa ukungabi nokuqonda okuyisisekelo kwalokho okumelwe kulawo manethiwekhi, benza iphutha njengethuluzi lecebo lebhizinisi noma lokumaketha.
Nov 4, 2009 ngo-4: 02 AM
Ngiyabonga kakhulu Scubagirl15! Konke kuqala ngamasu… ubuchwepheshe kufanele busetshenziswe kuphela EMVA kokuba zonke izinhloso zichaziwe. Baningi kakhulu abantu bezindaba zenhlalo abathanda ukuzama ukuthatha imithombo yezokuxhumana bayenze ilingane zonke izinkinga inkampani enazo. Zazise izinkulumo zakho zomusa!
Nov 4, 2009 ngo-3: 46 AM
Ngidinga ukubuyela emuva kumdlalo wami wokumaketha komphakathi. Izinto ziguquka kakhulu usuku ngalunye. Zonke izindlela ebengizisebenzisa angibonakali zisebenza njengamanje. Kepha uveze izinto ezimbalwa engingakaze ngicabange ngazo phambilini, futhi ngiyakwazisa lokho! Kuzofanele ngibuyisele isinqe sami egiyeni futhi ngisebenzise ithuba lokumaketha umphakathi kungekudala!
Nov 4, 2009 ngo-4: 07 AM
Ungakhathazeki kakhulu ngokulahleka kokubambeka. Sisezinsukwini zokuqala zasentshonalanga zasendle zokumaketha komphakathi futhi sinokuningi okufanele sifunde. Thola izinhloso kuqala, yakha isu… futhi uma ukumaketha kwezokuxhumana kungadlala indima KANYE futhi ube ne-ROI enhle enikezwe izinsiza… bese uyithola!
Nov 4, 2009 ngo-1: 15 PM
Njengenjwayelo… izeluleko ezinhle, ukuqonda okunesimo esihle sengqondo! Ngiyabonga Doug!